I-Dalian TekMax yasekwa. Ndenze iprojekthi yokuqala yokucoca.
Ukuchongwa kwesona sikhokelo senkampani yayiyindawo yokucoca kwigumbi lobunjineli.
Ekuqaleni kwasekwa inkqubo yolawulo lwenkampani.
Kuphumelele ukuqinisekiswa kwenkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001. Yakhe ifom ye-embryonic yenkcubeko yemanyano njenge "qela elinye elinobomi obunye ngento enye".
Ndiqalise ukuthatha inxaxheba kulwakhiwo olukhulu lwezinga eliphezulu, izityalo zokucoca.
Ndithathe iprojekthi yeQingdao Haier kwaye ndangena kwicandelo lokucoca kwimizi-mveliso Ndenza umthengi wokuqala wophawu phakathi kweFortune 500.
Ndithathe iprojekthi yokucoca izinto zebhayoloji okokuqala kwaye ndandisa ubungakanani beshishini kushishino lokutya. Beka phambili intsingiselo yophuhliso “lokuba ikhonkco kwityathanga lonikezelo lweFortune 500 ″.
Iphumelele ibhidi kwaye yathatha iprojekthi ye-Hisense, ethe yakhuthaza ngakumbi ulwazi lwegama kunye nefuthe lentengiso yeTekMax. Beka phambili amaxabiso asisiseko ombutho “othembekileyo nothembekileyo, athetha phandle emva kokuqwalaselwa, uxanduva oluphezulu kunye nokuzingisa”.
Beka phambili umbono wophuhliso lwenkampani "njengokudala umhlaba ococekileyo". Ndizamile ukusebenzisa iteknoloji yokumodareyitha ye-3D kwindlela yobunjineli, eyabeka isiseko sophuhliso lweTekhnoloji ye-BIM.
Beka phambili umxholo wophuhliso "sebenza kakuhle, kwaye uzakufumana umsebenzi". Ukusekwa kobudlelwane bokusebenzisana kunye neQela Langaphakathi laseMongolia Yili kwaye baqala iprojekthi yokuhlanjululwa kumasifundisane. Ukucaciswa kwesicwangciso sophuhliso lwenkampani kwaye kujolise kubathengi kumacala amabini okutya kunye neendawo zamayeza.
Inkampani yamkelwe ukuba ibe yishishini lesizwe eliphezulu. Itekhnoloji ye-BIM yafakwa kumjikelo wobomi bonke beprojekthi yokuhlanjululwa okokuqala. Inani leetekhnoloji ezisetyenziswayo zemodeli ziye zafunyanwa, kwaye kusekwe koku ukumisela inkqubo yokuqanjwa kwezinto ezintsha ezizimeleyo.
Umthamo wentengiso ugqithe kwizigidi ezili-100. Uhlobo olupheleleyo lwe-brand VI yenkampani yahlaziywa. Kuphuhliswe isizukulwana sokuqala sombane wokufakwa kweplate yesinyithi. Uqale isikimu esitsha sokulima italente kwaye waseka indlela yoqeqesho lwetalente kwinkampani.
Kuphakanyiswe iinkqubo zolawulo lokwakha ezisemgangathweni kuqala. Ukusekwa kwenkqubo yolawulo lwezinto ezizenzekelayo, kwaye ngokuthe ngcembe yandisa ubume benkampani kwinkampani. Ukuchongwa kwezikhokelo zophuhliso lwenkampani njengokumiselwa komgangatho, inkqubo, kunye nobukrelekrele.
Ndenze iprojekthi yokuqala yokucoca phesheya kolwandle. Ikomkhulu lenkampani lifudukele kumgangatho we-7 weziko leXinxing Xinghai. Beka phambili isicwangciso sophuhliso lwenkampani "Amanyathelo amathathu aya phambili kwiminyaka emihlanu". Iphuhlise inkqubo ye-ERP yenkampani kwaye yasungula inkqubo yayo yolawulo lwengcaciso. Beka phambili ujoliso lophuhliso lokuba ngumdibanisi wenkqubo yemo engqongileyo kunye nesakhono esomeleleyo sokuhambisa kunye netekhnoloji ekhokelayo e-China
Umthamo wentengiso ugqithe kwizigidi ezingama-250. Ukusekwa kwesebe loshishino lwamanye amazwe kwaye baqala ukuseta ubume beemarike zaphesheya. Ukuseka inkqubo yamaqabane nokwenza isicwangciso sobunini bomqeshwa.
Ifestile yegumbi elicocekileyo, Inkqubo yaManzi aBandayo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Igumbi elicocekileyo,